2011-05-15 ~ Myanmar Express
ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ဖော်ဆောင်နေသည့် နိုင်ငံများအကြမ်းဖက်ခြင်းတွေ ပပြောက်ရေး ကြိုးစားနေသည့် နေတိုးနှင့် အမေရိကန်သူတို့ပြောတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအိုင်ယာလန်ရောက် ဗြိန်တိန်ဘုရင်မကြီး လုံခြုံရေး စိုးရိမ်ရဘင်လာဒင်သတင်းများ Myanmar Express
မ ရယ် မောင်ရယ် မီဒီယာရယ်
မှတ်ချက် ( me = စိုင်းသိန်းဝင်းမ == အိမ်ထောင်ရေး ဖေါက်ပြန်သူ အမျိုးသမီးရဲ့ နံမည် ကို လွှဲပြောင်းပေးထားသည့် နံမည်) အမျိုးသမီး ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထောက်ထားသဖြင့် နံမည်ရင်း နှင့် နဲ့ အလုပ်အကိုင် တွေကို ဖျောက်ထားပါသည်။ မ <မ@gmail.com> Thu, Feb 24, 2011 at 6:45 AM 11:07 PM မ: စိုင်း me: ဗျာ မ: ဓါတ်ပုံတွေပိုပေးမယ်နော်11:08 PM me: happy! မ: အခုမဟုတ်သေးဘူး me: ရတယ်လေ11:10 PM မ: နောက်တခါဖုန်းခေါ်လို့မရလို့ စိတ်ဆိုးရင်11:11 PM ဘယ်လိုပြန်ချော့မလဲ me: သီချင်းလေး ဖွင့်ပြမယ်လေ11:12 PMမ: ဒါဆို အခုပို့ပေးနော်11:13 PM me: စိတ်ဆိုးနေလို့လား11:14 PM http://api.ning.com/files/zjgplRzSyeUSxvGsqzlZ4MrHYiLlrgsU1gvG6lvs7IkDhBKkgmdU2LhCVIkC3kiYaPaCgHfJz8HF78qapMksEJrIOmKlP3F8/MaMaChitLotMaPhyit.swf 8 minutes11:28 PM စိုင်း စောစောက လိုင်းပြတ်သွားတယ်11:29 PM စိုင်း5 minutes11:34 PM me: ပြန်ရပီ11:35 PM မ: စောစောကရေးတာ ဖတ်ရလား me: ဖတ်ရတယ်11:37 PM ဟယ်လို မ: ဖုန်းခေါ်လိုက်မယ်11:39 PM me: ရတယ်လေ ဒီကနေပြောလဲ11:40 PM သူများပြောနေအုန်းမယ် မ ကို32 minutes12:12 AM me: ခနလေးနော်17 minutes12:30 AM မ: စိုင်း ပြန်ရောက်ပြီ ဘယ်သွားနေလဲ5 minutes12:36 AM me: ရေချိုးနေတာ :)12:39 AM မ: စိုငိ်း ဒါဆိုရင် စောစောက စိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူး မ ဖုန်းခေါ်တုန်းက မကိုင်လို့12:40 AM မေးကြည့်တော့ ရေချိုးနေတာဆို အခုလည်း ရေချိူးနေတာလား12:41 AM me: မဟုတ်ဘူး ကျနော်ဖုန်းကိုရေချိုးခန်းထဲထိယူသွားတာ ဘယ်သူမှ လာမဖြေဘူး ကျနော့်ဖုန်းနဲ့ အစောက ကျနော်တယောက်တည်းရှိနေတာ ခု စကားလာပြောနေလို့12:42 AM မ: ဓါတ်ပုံပို့ပေးရမလား12:43 AM me: အင်း12:46 AM ပို့လိုက်ပီလား ခုနက ဖုန်းမလာပါဘူး ကျနော် ဘာသံမှ မကြားဘူး ရေပန်းသံနဲ့ မကြားရတာဖြစ်မယ်12:48 AMမ: ကြည့်ပြီးရင် ပြန်ပြောနော် အစောပိုင်းတုန်းက ဖုန်းခေါ်သေးတယ်လေ အဲဒီတုန်းက ကိုစိုင်းကရေချိူးနေတယ်လို့ပြောတယ်12:51 AM me: presenter နှစ်ယောက်က အဝေးကြီးပဲ12:53 AM အပြင်မှာတွေ့ရင် ကျနော် ဒီတိုင်းနေနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး :D12:56 AM မ: ထပ်ပို့ပေးမယ် ပုံအသစ်တွေလေ me: အင်း1:00 AM မ: ပုံတွေပို့လိုက်ပြီ အခုပုံက အ၇မ်းဖြူနေသလိုပဲနော်1:01 AM မိတ်ကပ်များနေလား1:02 AM စိုင်း ကြည့်နေလား me: အင်းကြည့်နေတာ လည်ပင်းနဲ့မျက်နှာအရောင် match ဖြစ်ပါတယ် လက်မောင်းရော မြှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် ;)1:03 AM လှတယ်မ: :) မွေးနေ့ကဒ်တွေလား1:04 AM me: i m glad you're thoughful မ: အထဲမှာရေးထားတာဘာလဲသိလား me: i'm glad you're understanding ဟင့်အင်း ပြောပြလေ1:05 AM မ: But most of all... I'm glad you are mine. me: :)1:06 AM So you let me be inside your heart? မ: of course it's because of your love1:07 AM me: မ ပုံကို ကြည့်နေတာ1:08 AM မ: ok တကယ်တမ်းလှတဲ့မိန်းမတွေထဲမှာ မပါဘူးနော်1:09 AM me: ကျနော့် အတွက် လုံလောက်ပါတယ် တနေ့က swedish နှစ်ယောက်တွေ့တယ် ကျနော့်ကို ကိုအေးချမ်းက မိတ်ဆက်ပေးတာ1:10 AM ဒီဗီဘီအတွက် internet security လာလုပ်ပေးတဲ့လူတွေတဲ့ တော်တဲ့လူတွေပဲ ကျနော့်ကို ရုရှားမှာ ဘာသင်လာလဲတဲ့ မ: အင်း ရေးထားတဲ့ စာကို ခဏဖြုတ်ထားတယ်နော်1:11 AM ရုံးမှာဆိုတော့လေ me: Rocket Engines ဆိုတော့ awful တဲံ အင်းပါမ: ဘာဖြစ်လို့လဲ me: လူတိုင်းပဲ1:12 AM ဂျပန်တွေနဲ့တွေ့တော့လဲ မင်းက Genius ပဲ ဘာညာနဲ့ မယုံနိုင်တဲ့ပုံမျိုး တခါတလေမေးတာတောင် ပြောရမှာ တမျိုးကြီးမ: ဟုတ်တာပေ့ါ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လေ အခု စိုင်းက အပြင်ရောက်နေတာလေ1:13 AM me: အင်ဟင်မ: အဲဒီလိုပညာရပ်တွေတပ်ထားတဲ့လူတွေအများစု ရှိတဲ့နေရာမှ မဟုတ်တာ သူတို့အတွက် အံသြနေမှာပေါ့1:14 AM me: ဟို programist တွေဆိုလဲ သူတို့သိထားတတ်ထားတွေက နည်းတာမှ မဟုတ်တာ1:15 AM ကျနော်က rocket ကတောင် ပရိုကရမ်ရေးတာထက် လွယ်အုန်းမယ် ထင်တာပဲမ: မတူဘူးလေစိုင်းရဲ လက်နက်ဆိုတော့ လူတွေက အထင်ကြီးတာပေါ့1:16 AM စိုင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့အထဲမှာ မ အတွက်အဓိက အဲဒါတွေမဟုတ်ဘူးနော် မ အပေါ်မှာ နားလည်လို့ me: အင်းပါ သိပါတယ်1:17 AM မ: တခုရှိတာက ဘာလို့ အဲလောက်မြန်သွားလဲမသိဘူး1:18 AM me: ကျနော် ပြောတာ မြန်သွားတာကိုး1:19 AM မ မှာ ဆွဲအားတွေ ရှိတယ်1:20 AMမ: ဟုတ်လား အခုမှပဲ ကြားဖူးတယ် me: အင်ဟင် မယုံဘူးလား1:21 AM မ: ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင်မသိဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေက ပိုပြီးလှကြတာကိုး1:22 AM သူတို့နဲ့ယှဉ်သွားရင် လူတွေကသူတို့ပဲ လှတယ်ဆိုပြိး ပြောကြဆိုကြ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြ ဆိုတော့1:23 AM me: အင် အဲဒါက ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲမ: အော် တခါတလေပါ ပါတီပွဲတွေမှာလေ me: သြော် မ ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကျနော်မှ မတွေ့ဖူးတာ မ: အိုကေ me: ဟားဟားဟား စတာပါ1:24 AM မ: ကိုယ်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေခဲ့တဲ့သူကလဲ1:25 AM မိတ်ကပ်လေ နဲနဲပါးပါးလိမ်းရင် မျက်လုံးခြယ်ရင် ရစရာမရှိတော့ဘူး ပြောတာလေ တခါတလေ သမိးကိုတောင် ပြန်မေးရတယ် မေမေလှလားလို့ me: :D မ: သမီးက အမြဲပြောတယ် မေမေကအလှဆုံးတဲ့ အဲဒါနဲပဲကျေနပ်နေရတာ me: အင်းပေါ့1:26 AM မ: she said you are the best beautiful mom I ever seen တဲ့1:27 AM ဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းလဲ သူကို မြန်မာလိုပါပြောတတ်အောင် ကျင့်ပေးနေပေမယ့်1:28 AM အင်္ဂလိပ်လိုပဲ အပြောများတယ် me: အင်း ဒီက ခလေးတွေလဲ နော်ဝေလိုပဲ ပြောကြတော့တယ် မ: စိုင်းကော1:29 AM သမီးက မ နဲ့အတူအမြဲရှိနေမှာ စိုင်း1:30 AM အဲဒါကိုလက်ခံလား me: ရှိနေရမှာပေါ့မ: :)1:31 AM me: အမှန်ကတော့ သူ့အတွက် ကံကြမ္မာက မတရားသလိုဖြစ်နေတာ1:32 AM မ: သမီးက နောက်ထပ်ညီမလေးမွေးပေးဖို့ ခဏခဏတောင်းဆိုတယ်1:33 AM မောင်လေးမလိုချင်ဘူးတဲ့ me: အင်း.. မ: ဒါပေမယ့် လက်ရှိအခြေအနေမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ me: အင်းပေါ့1:36 AM မ: စိုင်း အနာဂတ်ကို ဘယ်လိုတွေးတာလဲဟင် me: သူ့အတွက်လည်း အချိန်တွေ အများကြီးပေးရမှာပဲ1:37 AM အဖေနဲ့ သမီးတွေက သံယောဇဉ်ကြီးတတ်ကြတယ်1:38 AM မ: စိုင်းကိုမေးနေတာလေ1:39 AM me: ကျနော်လား မ အနားကို လာနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်1:40 AM ဒါ ကျနော်ပဲဆိုတာ မ သိလာအောင် အရင် ပြမယ်1:41 AM မ: မ က လာခေါ်မယ်ဆိုရင်ရော1:42 AM me: ကျနော့်ကို အဲဒီလို ပုံစံမျိုးလာစေချင်လား ဒါမှမဟုတ် ကျနော်နည်းကျနော့်ဟန်နဲ့လာစေချင်လားမ: ဘယ်ဟာ ပိုပြီးမြန်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်မယ်ထင်တယ်1:43 AM me: မြန်မယ်.. အနာခံရမယ်1:44 AM နာကျည်းသူတွေက..1:45 AM မ: စိုင်းရယ် မ လေ အဲဒါကြောင့် အကန့်ခွဲပြီးပြောနေ၇တာ မ အနေထားက အ၇မ်း စဉ်းစားရမှာ ပြီးတော့ စိုင်းကလည်း public figure ဖြစ်နေတယ် me: အင်းလေ..1:46 AM နအဖ များသိရင် မြန်မာ့အလင်းထဲ ထည့်ရေးမလား မသိဘူး မ: ဘယ်လိုလုပ်မလဲ1:47 AM me: မ အခု ဘယ်လိုတွေ စဉ်းစားထားလဲမ: အများကြီးပဲ အလုပ်ကလဲ အဓိကစဉ်စားတဲ့အထဲမှာပါတယ် me: အင်းေ လေ1:48 AM ကိုယ့်ဘာသာရပ်တည်မယ်ဆိုရ၈် အလုပ်က အဓိကပဲ မ: ********** မအတွက် ဘယ်လိုပြောမလဲ1:49 AM me: ကျနော်ကလည်း ဆူရှီလိပ်မလား ကျောင်းဆက်တက်မလား စဉ်းစားရမယ်မ: စိုင်းက ဒိရော်ကပြီဆို အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ် မ သိနေတယ် မ လည်း ကူညီပေးလို့၇တယ်1:50 AM me: အင်း.. အစွမ်းအစတွေက စမ်းသပ်ခွင့်မကြုံတော့ ဘယ်လောက်ရှိလို့ရှိမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး1:55 AM မ: http://thanhtut88.appspot.com/www.demowaiyan.co.cc/2011/02/blog-post_22.html me: တွေ့ပြီးပြီ1:56 AM ခု လူတွေက သတင်းတစ်ခုခုထူးတာနဲ့ ကျနော့် wall မှာ လာလာတင်ကြတယ် :D လိုက်ကြည့်စရာတောင်မလိုတော့ဘူ6း minutes2:03 AM Iမ: ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်2:04 AM me: ကျနော့်ကို ထွက်မလာခင်တုန်းက ဗေဒင်တွေ ဟောတာ မီဒီယာ လုပ်ငန်း နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းနဲ့ အကျိုးပေးသတဲ့2:05 AMမ: :) me: နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတော့ မသိဘူး မီဒီယာ နဲ့တော့ အကျိုးပေးတယ်နော် မီဒီယာ မမ တစ်ယောက်တောင် ချစ်သူ ရနေပီ :D2:06 AM မ: စိုင်း မ ကို တကယ်ချစ်လား2:07 AM me: ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲ အရမ်း.. ချစ်တယ်2:08 AM မ: မလည်း အရမ်းချစ်တယ် စိုင်းကို သေချာတောင်မြင်ဘူးသေးတာမဟုတ်ဘူး2:09 AM ဒါပေမယ့် စိုင်းကို စိတ်ထဲမှာ ရင်းနှီးနေတယ်2:10 AM တခြားအရာတွေဖယ်ထားပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် စိုင်းနဲ လူချင်းတွေရမှာလည်း ကြောက်တယ် me: ဘာဖြစ်လို့2:11 AM ကျနော့်ကိုကြောက်တာလား :) မ: စစ်သားဖြစ်နေလို့ me: ဖြစ်ရလေ2:13 AM ကျနော်က facebook မှာတင်ထားတဲ့ပုံတွေထဲကလောက် တောင်ကြည့်မကောင်းတော့ဘူး2:14 AM မ: အဲဒါက အရေးမကြီးဘူးလေ :) မ ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်က အခု ၁၃၀ ပေါင်လေ2:15 AM ဒီထက် မပိုအောင်ထိန်းနေ၇တယ် ပြီးတော့ စိုင်းအတွက် မ ကလှနေရင်ပြီးတာပဲ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား2:16 AM me: 130 ဆို မဝ ပါဘူး2:17 AM မ: ဓါတ်ပုံထဲမှာ ၀ နေလိုလား ဒီထက်တောင်ပိန်ချင်သေးတာ မျက်နှာ အ၇မ်းကျနေမှာစိုးလို့2:18 AM ဒါပေမယ့် ၀ိ်တ်ကို ဒီထက် ထပ်ချဖို့စိတ်ကူးထားတယ် me: တအားပိန်ရင်လည်း မကောင်းပါဘူးမ: ပြီးတော့ ညညကောင်းကောင်းအိပ်လို့မရဘူး me: အရပ်နဲ့ ဝိတ်အချိုးကို ထိန်းနိုင်ရင်တော်ပီပေါ့2:19 AM မ: အဲဒါဆိုရင်တော့ အတော်ပဲ ၅ပေ ၃ က me: အင်းလေမ: အလေးချိန် ၁၃၀နဲ့ ၁၃၅ ကြားမှာ ရှိရမှာလေ ဒီကစံနှုန်းပြောတာပါ ဒါပေမယ့် မ ထပ်ပြီး ၀ိတ်ချချင်တယ် me: အင်း တော်ပီပေါ့ မ: ကြိုးစားကြည့်မယ်2:20 AM me: ကျနော်လည်း ဆေးလိပ်ဖြတ်မယ် ဝိတ်လည်းချမယ် မ: စိုင်း လိုင်းပေါ်မှာ၇ှိနေနော် မ အလုပ်လုပ်လိုက်အုံးမယ်2:21 AM me: လုပ် me: အင်းမ: သူကိုအ၇မ်းကြိုက်တယ် ထိုင်းက သူငယ်ချင်းပိုပေးတာ me: သြော်2:23 AM မ: မ လေ ရှမ်းရိုးရာဝတ်စုံကို ထိုင်းမှာကတည်းက အ၇မ်းကြိုက်တာ ဒါပေမယ့် ရှမ်းတယောက်ကို ချစ်လာမယ်လို့ စိတ်ကူးတောင်မရှိခဲဘူး အဲဒီအချိန်က2:24 AM me: ;)6 minutes 2:47 AM မ: :) me: wanna kiss you right now2:48 AM မ: :)2:51 AM သတိရလို့ပြောထားအုံးမယ် မ ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို2:52 AM တခြားသူတွေမမြင်စေနဲ့နော် me: စိတ်ချ5 minutes2:58 AM မ: စိုင်း မိန်းကလေး ဘယ်နှစ်ယောက်ကို နမ်းခဲ့ဘူးလဲ me: မပြောဖူး သတ်ချင်သတ်လိုက်2:59 AM မ: ဘာလို့အဲလောက်တောင်ပြော၇တာလဲ မေးနေတာလေ ဘာလို့မဖြေချင်တာလဲ3:00 AM me: မ စိတ်မကောင်း မှာစိုးလို့ :)3:01 AM အများကြီး မနမ်းဖူးပါဘူးမ: အင်းဒါဆို စိုင်း မကိုနမ်းရင် အရည်ပျော်သွားမယ်ထင်တယ်3:02 AM me: ဘာဖြစ်လို့ .. မတတ်ပါဘူ3း:03 AM မ: မက ပိုပြီးနမ်းတတ်တယ်3:04 AM စိုင်း နောက်တာနော် ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်လိုက်အုံးမယ်3:08 AM စိုင်း ဘယ်ရောက်သွားလဲ3:10 AM me: လေးနာရီထိုးတော့မယ် မျက်စိသွားစမ်းမယ်ဆို သူများစကားလာပြောလို့မ: ဟုတ်သားပဲ3:11 AM ဖုန်းဆက်လိုက်အုံးမယ် ဘယ်နှစ်နာရီလဲလို့15 minutes3:26 AM မ: ၅နာရီ ၁၅ မှတဲ့ ဒီနေ့ဓါတ်ပုံတွေပို့ပေးတာ ကျေနပ်လား14 minutes3:40 AMမ: ကိုစိုင်း13 minutes3:54 AM me: မ ပုံပို့ပေးတာရော ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းတိုင်း တစ်ခွန်းတိုင်းအတွက် ကျေနပ်တယ် ကြည်နှူးတယ် အိမ်ကို ပြန်ရအုံးမယ်နော် နာရီဝက်လောက်ကြာမယ် အလွန်ဆုံး ၄၅ မိနစ်ပေါ့ စက်ခန ပိတ်ထားမယ်3:55 AMမ: အိုကေ ဂရုစိုက်ပြန်နော် me: အင်း45 minutes4:41 AM me: အိမ်ပြန်ရောက်ပီ39 minutes5:21 AM မ: စိုင်း မ ဖုန်းခေါ်တာမ၇ဘူးလား me: ဗျာ ခုန က ဝင်တယ်မ: တခါပဲလား me: ဟုတ်တယ် မ: နောက်ထပ်ထပ်ခေါ်သေးတယ် me: ဒုတိယ တခါက ကိုသန်းဝင်းထွဋ်နဲ့ engage ဖြစ်သွားတယ်နဲ့တူတယ်5:22 AM သူကျနော့်ကို ဖုန်းအကြာကြီးခေါ်သေးတယ် မ: ဒီတခါ တကယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ် me: ဘာဖြစ်လို့ မ: မ က ဖုန်းပြောချင်လို့ ခေါ်ပါတယ် me: ကိုသန်းဝင်းထွဋ်နဲ့ ကျနော် စကားများထားတာ သူက သူမှားထားလို့ စကားရောဖောရော လာပြောနေတာ5:23 AM ကျနော်လည်း အလိုက်အထိုက်မပြောရင် စိတ်နုရာကျမှာစိုးလို့ ပြန်နားထောင်ပေးနေရတာ စိတ်မဆိုးနဲ့နော်5:24 AM မ: စောစောက ဆရာဝန်ဆီရောက်နေတာ me: ဟုတ်လား မ: စောင့်နေ၇တာနဲ အချိန်ရလို့ဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုပြီး me: မြန်လှချည်လား မ: ခေါ်တာ me: အင်း မ: ဟုတ်တယ်5:25 AM မက မျက်ကပ်မှန်ကို တပ်လိုက်ဖြုတ်လိုက်လုပ်၇မယ် တချိန်လုံးတပ်ထားဖိုမလိုဘူးတဲ့ me: ဟုတ်တယ်လေ မ: ကွန်ပြူတာ၇ိုက်ရင်း ဖြုတ်ထားပါတဲ့ me: အင်း5:26 AM အမှန်က ကွန်ပျူတာ သုံးရင် muticoated glasses ပဲတပ်တာကောင်းတယ်မ: ဟုတ်တယ်5:27 AM ဒါနဲ့ ကိုသန်းဝင်းထွတ်က စကားဘာမှားထားလဲ me: သြော် facebook မှာ ရန်ကုန်က လူတစ်ယောက်ကျနော့်ကို လာပြောတယ် သူ့တို့ရပ်ကွယ်မှာ fatherland company က ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ပိုင်တယ်ဆိုပြီး သောင်းကျန်းနေတယ်တဲ့5:28 AM အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမေးတော့ ကျနော်က မီဒီယာ တစ်ခုခုကို စာရေးလိုက်လေ လို့ အကြံပေးလိုက်တာ တခြားတစ်ယောက်က talk2dvb လိပ်စာကို cm နဲ့ ဝင်ညွှန်းသွားတယ်5:29 AM အဲဒါ သူလည်း စာပို့လိုက်တယ် နောက်တော့ ကျနော့ကို chat မှာလာလာမေးတယ် ဘယ်နေ့လွှင့်လဲ ဘာညာနဲ့ မ: အဲဒါတွေတယ် ဘာသဘောလဲဟင် me: ကျနော်က ကိုသန်းဝင်းထွဋ်ကို ပြန်မေးပေးရတာပေါ့ မ: အော် me: နောက်တော့ အဲဒီအစီအစဉ်လွှင့်မယ့်နေ့မှာ ကျနော့်ကို ထပ်မေးတယ်5:30 AM ကျနော်လဲ ကိုသန်းဝင်းထွဋ်ကို ထပ်ပြော သူက မေးလ်ကို ပြန်ရှာမတွေ့ လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေတာ နောက်အဆင်ပြေသွားတယ် အဲဒီမှာ ကျနော်က ပြောလိုက်တာ ကိုသန်းဝင်းထွဋ်ကို “လူတွေက ကျနော့်ကို ဒီဗီဘီ အောက်မေ့နေလား မသိဘူးဗျာ”ဆိုပြီးတော့ အဲဒီမှာ သူက ပြန်ပြောတာ5:31 AM နောက်တခါဆိုရင်မေးလိုက်တဲ့ “လူကို ဒီဗီဘီ မယားငယ်များ အောက်မေ့ နေလား..လို့မေးလိုက်တဲ့ အဲဒါ ကျနော် တော်တော်စိတ်ဆိုးသွားတယ် မ: အ၇မ်းမိုက်၇မ်းတယ်နော် အဲဒါမျိူးပြောထွက်တာလေ5:32 AM me: ကျနော်ကို ဒီဗီဘီက တပိုင်းတစထောက်ပံ့ထားတာ ရှိတယ်လေ နောက်တော့ သူလွန်သွားတာ သိလို့ သူနဲ့ ဘီယာလာသောက်ပါလား ဆိုပြီးခေါ်တယ်5:33 AM ကျနော်က “မယားငယ်ဆိုတော့ ဘီယာအတူတူလာသောက်လို့ မဖြစ်ပါဘူးဗျာ”လို့ပဲပြန်ပြောလိုက်တယ် နောက် မဆက်ဆံတော့ဘူး5:34 AM မ: ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် အဆင့်အတန်မရှိဘူး အဲဒီလူကလေ ထားလိုက်ပါတော အတွင်းကျကျမပေါင်းသင်းရင်ပြီးတာပဲလေ5:35 AM မက ထိုင်းမှာကတည်းက ပုံစံကို ကြည့်လို့မ၇တာ မေးထူးခေါ်ပြောလိုက်ပဲရှိတယ်5:36 AM me: အင်း.. ကျနော့်ထက်ကြီးပါတယ် အကိုအရွယ်ပါ ဒါပေမယ့် ထိန်း”သိမ်း”မရှိဘူး စကားပြောတာ.. လူကြီး မဆန်ဘူး5:37 AM ကျနော်က ပြန်သည်းခံနေရတယ်မ: ထိုင်းကအိမ်မှာ လာပြီး စားသောက်လေ့၇ှိတယ် me: အင်း မ: ဒါပေမယ့် မက စကားမပြောဖြစ်ဘူး လူတကာအတင်းပြောနေလို့လေ me: အင်း5:38 AMိကိုယ်ထက်သာရင် မနာလိုဘူး မ: ဘယ်သူကဘယ်သူနဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်တာ ဘယ်လိုချကြတာ me: ကိုယ့်ထက်နိမ့်ရင် နှိမ်တယ် မ: ဘယ်က ဘာဖြစ်တာဆိုတာ သူပြောမှသိရတယ် ဟုတ်တယ် me: အင်း5:39 AM မ: မစိတ်ကတခု၇ှိတယ် အဲလို အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့သူကို လုံးဝလူရာမသွင်းတာလေ သူတို့လည်းသိတယ်5:40 AM me: အင်း စစ်ဗိုလ်ဖြစ်ခဲ့တာ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခဲ့တာ အဲဒီအကြောင်းတွေ လုံးဝ ပြောလို့မရဘူး ရုရှားက အကြောင်းတွေ ပြန်ပြောမိရင် ကြွားပါတယ်ဆိုပြီး ဘာမှန်းလဲမသိဘူး5:41 AM ကျနော်လဲ သူငယ်ချင်းတွေ ပတ်ဝန်းကျင်ဟောင်းတွေကို သတိရတဲ့အခါ ပါးစပ်ကလွှတ်ခနဲပြောမိတာရှိတယ်5:42 AM တပ်ထဲမှာ ရဲဘော်တွေနဲ့ ဘယ်လို ပျော်စရာကောင်းတာ ရုရှားရောက်မှ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကို ရတာ အဲဒါတွေ သူတို့ရှေ့ပြောမိရင် လုံးဝ irratate ဖြစ်တာ သူတို့အတွက်5:45 AM မ: အရမ်းဆိုးတာပဲ5:47 AM ပိုတောင်ဗဟုသုတရသေးတယ် me: အင်း မ: ကိုစိုင်းကကြုံလို့ပြောပြတာဆိုရင်5:48 AM စိုင်း မ အခုမှ မနက်စာနဲ့ ညစာ ပေါင်းစားနေတာ me: ကျနော် ရောပဲ ခုနလေးတင် စားပီးသွားတာ မ: တရုတ်ဆိုင်က ကြာဇံကျော်စားနေတာ ကြော် me: ဂွတ် ကြိုက်လားကြာဆံကြော်မ: အ၇မ်းကြိုက်တယ်5:49 AM me: ငယ်ငယ်က သိပ်မကြိုက်ဘူး ကြီးမှ မ: အခုပိုလိုက်တဲ့ပုံက မနက် တုန်းက5:51 ******* ******** နှုတ်ဆက်ပွဲလုပ်တာ တွေလား5:52 AM me: မကြည့်ရသေးဘူး ကြည့်လိုက်မယ် မ: အိုကေ 5:55 AM မ : ***တို့ပုံကြည့်ရင်ပို့ပေးမယ် me: ဟင့်အင်း မ ပုံပဲ ကြည့်ချင်တယ်5:56 AM မ: ရှေကိုဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ တခါတလေ မပြတ်မသားဖြစ်နေ၇တဲ့ အခြေအနေကို ၇င်ဆိုင်နေ၇တယ် နိုင်ငံရေးစကားအရပြောမယ်ဆိုရင်5:57 AM transition ချောမွေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဒီဘက်အသိုင်းအ၀ိုင်းတင်မကဘူး သတင်းစာတွေမှာပါရေးခံရရင်တော့ မလွယ်ဘူး me: တစ်ဆင့်ချင်းစီ လုပ်ရတယ် ဟားဟားဟား သေချာတယ်5:58 AM မ ကျနော့်ကို လာခေါ်မယ်လို့ပြောတော့ ကျနော် အရမ်းပျော်သွားတယ် အဲဒီလောက်ထိ စဉ်းစားထားလို့ပါ5:59 AM ဒါပေမယ့် သူများတွေ ကျနော့်ကို ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုရော တွေးမိလား မ ကိုရောပေါ့လေ6:00 AM ကရင်းကဒ်ရဖို့အရေး သူများ အိမ်ထောင်ရေးကို ဖျက်တဲ့...အင်း...6:01 AM မ: စိုင်းအထင်ကိုပြောနေတာလား me: ထင်တာ မဟုတ်ပါဘူး တွက်ထားတာ ကျနော် အဲလို လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး မ: :)6:02 AM me: မ ရဲ့ စိတ်ကို ရရင်ပဲ ကျနော် ကျေနပ်ပါတယ်6:03 AM မ: ဒါပေမယ့် လက်တွေ့အခြေအနေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖြတ်သန်း၇မလဲ6:04 AM ဆိုတာ စဉ်းစားရမယ်နော် စောစောက ကိစ္စတခုပေါ်လားလို့ ***ဖုန်းဆက်ဖြစ်တယ် အစကတော့ ကောင်းကောင်းသူပြန်မပြောဘူး မ ကအေးအေးဆေးဆေးပဲမေးတော့6:05 AM ပြန်တော့ပြောပါတယ်။ me: အင်းမ: ဒါပေမယ့် မ သူကိုဆက်ပြီးမလိမ်ချင်ဘူး သူကိုပြောနေတယ်ဆိုရင် စိုင်းကို me: အင်း မ: မ သစ္စာမရှိရာရောက်မယ်လေ6:06 AM****** me: အင်းပေါ့6:07 AM မ: စိတ်ညစ်စရာတွေပဲနော် ဘာဖြစ်လို့ စိုင်းကို မ သွားတွေလဲမသိဘူး me: :)6:08 AM မ: သွားပါ။ မ ကဖုန်းခေါ်ရင် မကိုင်တာနဲ့ပဲကြုံနေ၇တာလေ6:11 AM စိုင်း me: ဟင် မ: မရဲ့အသံက စွဲဆောင်မှု၇ှိတယ်လိုကထင်လား me: ဟင်းဟင်6း:12 AM မ: ဘာလိုရီတာလဲ အကောင်းမေးနေတာ me: အဖြေကို သိရဲ့သားနဲ့ 6:15 AM မ: ဒီနေ့အရမ်းကံကောင်းတယ် စိုင်းနဲ့အကြာကြီးပြောလိုရတယ် အလုပ်တွေကပြီးနေပြီလေ me: ကျနော့် အတွက်လဲကောင်းတာပေါ့ me: massage လုပ်ပေးမယ်6:18 AM မ: အခုလုပ်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ် အ၇မ်းညောင်းနေတယ် me: :) မ: မရဲအတွေအကြုံပြောရရင် အချစ်ဆိုတာ ထိုက်တဲ့သူနဲ့မှရတာ6:19 AM ကိုယ်ကပေးနေပေမယ့်လည်း မယူဘူးဆိုရင်အလကားပဲ ကိုယ်ကလည်း တဘက်ကပေးနေပေမယ့် မယူဘူးဆိုရင် မရဘူးပေါ့ ************6:29 AM me: အင်6း:31 AM သွားတော့မှာလား မ: နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ်လိုသေးတယ်6:32 AM စိုင်း သေချာစဉ်းစားနော် me: ဟမ်မ: :) ချစ်လို့စတာ စိုင်းက အခု ၀ နေလား me: ဝ တာပေါ့ မ: ဘယ်လောက်ရှိလဲ6:33 AM me: ချိန်ကို မကြည့်မိဘူးမ: မ မောင်တွေ တူတွေလဲဝနေလို့ me: များတာတော့ အမှန်ပဲ မ: ၀ိတ်တွေလျော့ခိုင်း၇တယ် သားကြီးဆိုရင် ၁၃ နှစ်ပဲ၇ှိသေးတယ် me: ကျနော်လဲ လျော့ရမယ် မ: ၁၈၀ လောက်ရှိနေပြီလား ဒီထက်များလားတောင်မသိဘူး me: အင်း မမေးနဲ့6:34 AM မ: မက တူတွေကို အရမ်းချစ်တာ****** me: အဲ မ: fb မှာ သူတိုနဲ့တွဲ၇ိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ အကုန်ဖျက်ပစ်တယ် မအရမ်းစိတ်ဆိုးတာပဲ me: ဒုက္ခ6:35 AM ခုရေးနေတာတွေ့ရင် ရူးသွားမလားမသိဘူး ဒေါသထွက်လွန်းလို့ ကျနော် သူများကို မပူလောင်စေချင်ဘူး မ: ဟုတ်တယ် မ လည်းဒီအတိုင်းပဲ6:36 AM သူက ဖြစ်တာကအ၇မ်းဆိုးတယ် ဘယ်လိုမှ နားလည်လို့မ၇ဘူး me: အင်း.. သူကပဲ မ ကို တဖက်သတ်ချစ်နေခဲ့တာလာ6း:37 AM သူချစ်တဲ့ အချစ်ကို မ သိအောင် မပြတတ်တာလား မ: ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး ဒါပေမယ့် မ ဘက်ကပဲ အလျော့ပေးရတာကတော့သေချာတယ် နှစ်ယောက်စလုံးအလုပ်လုပ်လို့ တာဝန်တွေခွဲမလားဆိုတော့6:38 AM သူက ပိုပြီး advantage ယူတယ် မ ကအဲဒါတွေမတွက်ခဲ့ပါဘူ6း:39 AM သူငယ်ချင်းတွေတွက်ပြမှ နားလည်တာ6:40 AM တခါတလေ ဘာလို့ အဲလောက်တုန်းလဲမသိဘူး me: :)6:41 AM ကျနော်က ကြင်နာတတ်လား? အလိုက်သိလား?6:43 AMမ: စိုင်းလား အကုန်လုံးပဲ နောက်တော့မသိဘူး me: အိုခေမ: အဲဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ ချစ်တယ်ဆိုတာကို မ မှာကြောက်နေတာ :)6:48 AM me: သွားပီလား စိုင်းသိန်းဝင်း လုပ်နေတာ ဒီပုံအတိုင်းဘဲကြာကူလီ စိုင်းသိန်းဝင်းCredit : http://www.facebook.com/notes/ko-iron/%E1%80%99-%E1%80%9B%E1%80%9A%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%9A%E1%80%B9-%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%9A%E1%80%B9/111020535651625Myanmar Express
Facebook မသုံးတော့ဘူးဆိုတဲ့ စိုင်းသိန်းဝင်း အကြောင်းကို Facebook ပေါ်က ဖွင့်ချမှုများ
ဘာလဲဟဲ့ စိုင်းသိန်းဝင်းby Ko Iron on Thursday, 19 May 2011 at 12:38မှတ်ချက် ( me = စိုင်းသိန်းဝင်းစံပယ် == အိမ်ထောင်ရေး ဖေါက်ပြန်သူ အမျိုးသမီးရဲ့ နံမည် ကို လွှဲပြောင်းပေးထားသည့် နံမည်)Chat with****1 message **** <*****@gmail.com> Thu, Feb 24, 2011 at 8:32 AM To: ***@gmail.com 8:00 AM စံပယ်: စိုင်း me: ပြန်လာပီ စံပယ်: လက်တွေအရမ်းညောင်းနေတယ်8:01 AM အရမ်းလည်း ပင်ပန်းတယ် me: ကျနော့်ကိုမှီထားလေ :)8:03 AM http://myitzuri.com/mtv_view.php?vcd_id=852&artist=Yadana+Oo&title=Ma+Nae+Maung နားထောင်ကြည့် ကျနော်တော့ ခုမှ ကြားဖူးတယ် ပြန်ရတော့မှာလား8:07 AMစံပယ်: စိုင်းအကြောင်းစကြားတုန်းက မ ထက်ကြီးမယ်ထင်တာ8:08 AM me: အင်းစံပယ်: ပြီးတော့ အ၇မ်းတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ် ဒါပေမယ် ပတ်သက်လိမ့်မယ်လို့ ဘယ်လိုမှ ထင်မထားခဲ့ဘူး မ နဲ့ ပတ်သက်လာလိမ့်မယ်လို့ မတွေးခဲ့ဘူး me: ဘယ်သူကတွေးမိမှာလဲ8:09 AM စံပယ်: :) me: ကျနော့် ဘဝကိုက အရမ်း အပြောင်းအလဲတွေ မြန်လွန်းနေတယ်8:10 AM ကျနော်က အဲဒီ သီချင်းကို စတွေ့တွေ့ချင်းက နွဲ့ယဉ်ဝင်းဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းပဲထင်နေတာစံပယ်: ဟုတ်လား8:11 AM me: အမှန်ကတော့ မ လို့ခေါ်ရလောက်အောင်လည်း အသက်က မကွာပါဘူး :) စံပယ်: ဟမ် စိုင်းနော်8:12 AM နှစ်နှစ်တောင်ကြီးတာ ခေါ်ရမယ် me: :) ကျနော်ကတောင် ရုပ်ပိုရင့်နေအုံးမယ် စကားပြောတာရော ကိုယ်က ကိုယ်က လို့ပြောတာ အကျင့်ပါနေပြီ စံပယ်: အဲဒါက ကိစ္စမရှိပါဘူး8:13 AM စိုင်းလို့သုံး၇မယ် ကိုယ်က လို့မပြော၇ဘူး me: :Dစံပယ်: လူချင်းတွေရင် အရင်အမျိူးသမီးတွေအကြောင်း ကြွားချင်နေပုံရတယ် me: မဟုတ်ပါဘူး8:14 AM တပ်ထဲမှာ အရာရှိအချင်းချင်းမှာလည်း ကျနော်က စီနီယာ တော်တော်ကျတယ် နေခဲ့တဲ့ တပ်တွေမှာ ပြောပါတယ် ကျနော်တို့ ကျောင်းမှာက အသက်ကြီးတာငယ်တာထက် စီနီယာ ကျတာကို ပိုဦးစားပေးတယ်လေ8:15 AM တချို့ဂျူနီယာတွေက ကျနော့်ထက် လပိုင်းတောင်ကြီးတယ် မရဘူး ညီလေးပဲ အဲဒါ တကျောင်းတည်းဆင်းတွေနော်8:16 AM သူတို့နဲ့ ပြောတော့ ကို က အကို က အဲလိုပဲ ပြောတာစံပယ်: အဲတာမျိူး မကြိုက်ပါဘူး အသက်အရွယ်အလိုက်ကတော့ ပြောရမယ် အလုပ်မှာ ကိုယ်က ဘယ်လောက်ပဲရာထူးကြီးကြီး me: ပြောပါတယ်8:17 AM ကျနော် ဆရာဝန်တွေကို အကိုကြီးပဲခေါ်တာ သူတို့က ဆေးကျောင်းမှာ အကြာကြီးတက်ခဲ့ရတော့ စစ်ထဲဝင်တဲ့အချိန် အသက်ကြီးနေပီစံပယ်: ဟမ် ဘယ်လိုတွေလဲမသိဘူး အကိုကြီးတွေ ညီလေးတွေနဲ့8:18 AM အမေရိကန်စစ်တပ်မှာတော့ me: ကျနော်တို့လို ၁၈ နှစ်တည်းက စစ်ထဲရောက်နေတဲ့လူတွေထက်စာရင် သူတို့က ဂျူနီယာ ကျတယ် စံပယ်: ရာထူးကိုပဲတပ်ပြီးခေါ်တာပဲ ကာနယ် ဆိုလည်းကာနယ်ပေါ့ me: ရာထူးတူရင် fast name ခေါ်တာ ခင်ရင်ပေါ့8:19 AM မတူရင် surname ခေါ်တာတော့ ရှိပါတယ် သီချင်းနားထောင်ကြည့်မိလား8:20 AM စံပယ်: အင်း နားထောင်တယ်8:21 AM တချိူသီချင်းတွေနားထောင်ရင်း စိုင်း မကို ပြောပြနေသလိုပဲ me: ကျနော် သီချင်းရွေးတာ တော်လို့ပေါ့နော်စံပယ်: ဟုတ်တယ် အဲဒါကြောင့် ပိုချစ်သွားလားမသိဘူး me: Happy!8:22 AM စံပယ်: စိုင်း မ ကိုဘယ်အချိန်လောက်က စိတ်ဝင်စားခဲ့တာလဲ me: မသိလိုက်ဖူး ဖုန်းမျှော်တာကနေ စ တာပဲစံပယ်: ဟုတ်တယ်8:23 AM သနားပါတယ်ရှင်။ မ ကအဲဒါကိုသတိမထားမိဘူး စိတ်ထဲမှာ ဖုန်းပြောချင်တာကတော့ me: :)8:24 AMစံပယ်: ခဏခဏပဲ me: မ ရုံးဖုန်းကနေ မပြောနဲ့တော့နော် စံပယ်: အကြောင်းအရာတွေကလည်း စဉ်းစားလိုက်ရတာအမောပဲ ဟုတ်တယ် ကဒ်ဖုန်းနဲ့ခေါ်တိုင်းအဆင်မပြေဘူး me: evaluation ကျရင် ထည့်ရေးခံနေရအုန်းမယ် စံပယ်: အဲဒါကို စိတ်ညစ်နေတာ8:25 AM me: iphone/htc သုံးရင် skype install လုပ်ပြီးခေါ်လို့ရပါတယ်စံပယ်: ကဒ်ဖုန်းနဲခေါ်တိုင်း စိုင်းက မကိုင်တာပဲဖြစ်နေတယ် me: ခုခေါ်ကြည့်မလား8:26 AM စံပယ်: ကားမောင်းရင် ခေါ်လိုက်မယ် me: ကားပေါ်မှာ ကဒ်ပေါ်က ကုဒ်ကို ဖတ်ပြီး နှိပ်နေရအုန်းမယ် ဘယ်လိုလုပ် အဆင်ပြေမှာလဲ8:27 AM ကားမောင်းလို့စံပယ်: အင်း အန္တရာယ်တော့များတယ် me: bluetooth (head piece) နဲ့ပြောတာလား အင်းလေစံပယ်: မနက်ကအဲဒါကြောင့် စိတ်ဆိုးနေတာ8:28 AM မရလို့ ထပ်ခါထပ်ခါခေါ်နေတာ ကောင်းမောင်းရင်းနဲ့ me: :)8:29 AM မ လက်ကလေးကို ကိုင်ထားချင်တယ်8:31 AM စံပယ်: စိုင်း8:32 AM take care me: မ ရော သတိထားမောင်း စံပယ်: အိုကေ me: ချစ်တယ်စံပယ်: မက အရမ်းချစ်တယ် :)8:33 AM me: :) စိုင်းသိန်းဝင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်by Ko Iron on Wednesday, 18 May 2011 at 20:42မှတ်ချက် ( me == စိုင်းသိန်းဝင်း စံပယ် == အိမ်ထောင်ရေး ဖေါက်ပြန်သူ အမျိုးသမီးရဲ့ နံမည် ကို လွှဲပြောင်းပေးထားသည့် နံမည်) စံပယ်: ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စားလို့နေလိုရနေတာဆိုတော့ တော်သေးတာပေါ့ me: အင်း4:07 AM ဒီမှာကျောင်းတက်နေတဲ့လူဆိုရင် ဗီဇာပိုလွယ်တယ်ဆို မသီတာ ကတော့ သူ့အိမ်မှာနေနေတုန်းက အကြံတော်တော်ပေးတယ် ကျောင်းတက်မနေနဲ့တော့တဲ့ ရရာဝင်လုပ်တဲ့4:08 AM ဒီဗီဘီမှာ သန့်ရှင်းရေး ဝင်လုပ်တဲ့ ဟိုတယ်တွေမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့လဲ ချိတ်ပေးတယ်စံပယ်: ဟမ်4:09 AM တခုရှိတာက အမေ၇ိကားလာဖို့မှာ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာ4:10 AM me: လာချင်တာတော့ ခရီးသွားခွင့်ရတာနဲ့ တန်းထွက်ချင်တာပဲစံပယ်: စဉ်းစားဖိုလိုမယ်ထင်တယ် me: အချိန်တွေအရမ်းပုပ်တယ်4:11 AM စံပယ်: ဆုတောင်းရမှာပါ4:12 AM အခြေအနေတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ me: အင်း သူများတွေပြောတာတော့ ပီအာ မရခင်ထွက်ရင် လက်ရှိစာအုပ်ကို ပစ်ရမယ်လို့ပြောတာပဲ4:13 AM ဆိုတော့ ပီအာရမှဆိုရင်လည်း နော်ဝေကနေ ခွာလို့မကောင်းတော့ဘူးလေ သုံးနှစ်မှ ပီအာရမှာ4:14 AMစံပယ်: အင်း4:15 AM me: စကတည်းက ယူအက်စ်ကိုလာလိုက်ရင်အကောင်းသားး)4:16 AM ကျနော်ကလည်း သိဖူးလေစံပယ်: အင်းနော်4:17 AM me: နောက်တစ်ခါမိုက်ရူးရဲရအုန်းမယ်နဲ့တူတယ်စံပယ်: အရင် နော်ဝေးက ခရီးထွက်ခွင့်ရအောင် စောင့်ကြည့်ပါအုံး me: ကျနော်က စိတ်အညစ်မခံဘူး လုပ်ချင်ရာလုပ်တာ ဟားဟား4:19 AMုခုလည်း နော်ဝေက ကျနော့်ကို ညစ်နေလားမသိဘူးဗျာ ကြာလှပီ စာအုပ်ကမပေးဘူး4:21 AM စံပယ်: စိတ်ရှည်ရမှာပေါ့ ကိုယ် control မလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာLike · · ShareChan Nyein likes this.Ko Iron ကိုယ့်ကို ကို နူကလီယား ပညာရှင်ကြီး ၊ ဒုံးကျည် ပညာရှင်ကြီး ဆိုသူက နော်ဝေ မှာ DVB မှာ သန့်ရှင်းရေး အလုပ်သမား လုပ်မလို့တဲ့ ၊ အဟေးဟေး၊ နော်ဝေ ကေ န အမေရိကန် ကို လစ်ဖို့ ကြံစည်နေပါပြီ၊ အဲဒီမှာ အမေရိကန်ရောက် လင်ရှိ မီဒီယာ မမ ကြီး ကို ကြာခိုတော့တာပါဘဲ ခင်ဗျာပုလွေ ဘာဂျာ ကြိုက်တဲ့ ဖိုက်တာကြီး စိုင်းသိန်းဝင်းby Ko Iron on Wednesday, 18 May 2011 at 19:03 မှတ်ချက် ( me == စိုင်းသိန်းဝင်း စံပယ် == အိမ်ထောင်ရေး ဖေါက်ပြန်သူ အမျိုးသမီးရဲ့ နံမည် ကို လွှဲပြောင်းပေးထားသည့် နံမည်) me: Baretta Sub-compact ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ ပစ်ချင်ခတ်ချင်တာ မဟုတ်ဘူးလေ ဒီတိုင်းကိုကြိုက်တာ8:23 AM သေနတ်ပြီးရင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကြိုက်တယ် ဂစ်တာကြိုက်တယ် ပုလွေ၊ ဘာဂျာ အဲလို တူရိယာ လေးတွေလဲ ကြိုက်တယ် စံပယ်: ဂစ်တာမတီးဖြစ်တာ ၁၀ နှစ်ကျော်သွားပြီ me: ဟုတ်လား စံပယ်: ကျောင်းသူတုန်းကတီးတယ် me: နောက်မှ ဂစ်တာတီးပြီး ဆိုပြ ဇိမ်ပဲ နားထောင်မယ် စံပယ်: ပြန်လေ့ကျင့်ရမယ်8:25 AM လက်ကွက်ကတော့ မှတ်မိတယ် me: ကျနော်က ဗယ်ဖက် လက်သန်းလေး ကျိုးသွားတယ် စံပယ်: ဘာလို့လဲ ကိုစိုင်း me: ပြန်ဆက်တာ ကောက်နေတယ် အင်း.... တစ်ယောက်ကို တီးထည့်လိုက်တာ ကျနော်က အဲလိုပဲ8:26 AM ရှစ်တန်းနှစ်တုန်းက ညာဖက်လက် ကျိုးတယ် အဲလိုပဲ လက်ဝှေ့ထိုးရင်း ခု လက်သန်းက မော်စကိုမှာ ခြောက်တန်းလောက်ကတည်းက ဗယ်လက်လက်ဖျံတခါကျိုးတယ် အဲဒါလည်း ရန်ဖြစ်တာပဲ8:28 AMစံပယ်: ကိုစိုင်းရယ် အဲလောက်တောင် ၇န်ဖြစ်တာလား8:29 AM me: အင်း ခုလဲ ဦးသန်းရွှေနဲ့ ဆက်ဖြစ်နေတယ်လေ8:31 AM Iစံပယ်: အခုဟာက လူချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ချတာကိုပြောတာပါ me: ယောင်္ကျားလေးတွေကတော့ ဒီလိုပဲလေ ငယ်တုန်းဆိုတော့လဲ8:32 AM မော်စကိုမှာ တအားခံရတာ သူများတွေဆို စံပယ်: စံပယ်လေ သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ် me: ရုရှားတွေ လုပ်လွတ်လို့ခံလိုက်ရတာတွေချည်းပဲ စံပယ်: ကိုစိုင်းက ပိုပြီး ဆိုးသလိုပဲ me: အင်း စံပယ်: ဖြစ်ရမယ် ရုရှားတွေနဲ့ပဲ ချတာ ဘာဖြစ်လို့လဲ8:33 AM me: ရေဒီယိုကျမှ ပြောမယ်လေ စံပယ်: ဒီလိုပဲ ၇န်စကြတာလား me: အများကြီးပဲ ပြောရမယ်ဆို ရာဇဝင်နဲ့လာတာ နိုင်ငံရေး တွေလဲပါတာပေါ့8:34 AM ရုရှားနိုင်ငံရေးသမားတချို့ရဲ့ အပေါစား ဝါဒဖြန့်မှုဒဏ်တွေပေါ့ စံပယ်: ဟုတ်လား စံပယ်ရော ကိုစိုင်းကို ကြောက်ဖို့လိုလား me: မိန်းမနဲ့ ခလေးတွေက ကြောက်စရာမလိုပါဘူး8:36 AMစံပယ်: သူငယ်ချင်းတွေ စကားများ၇န်ဖြစ်လို့ ၀င်တားရ ဆွဲရတာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သွေးထွက်တာမျိူးတော့ မကြုံရဘူး me: အင်း... တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်းမှာဆို အချင်းချင်း ပစ်သတ်ကြတယ် အရာရှိတွေလေ8:37 AM ဗထူးမှာ လေ တပ်ခွဲမှူးသင်တန်းသွားတက်တုန်းက ညဖက်ကြီး အချင်းချင်း ကျည်ထိုးပြီး ထချိန်ကြတာ.. တော်သေးတယ် မဖြစ်လိုက်လို့8:38 AM အဲဒီညက ကျနော်က တပ်ခွဲမှူးတာဝန်ဒုံးကျည် ပညာရှင်ကြီး စိုင်းသိန်းဝင်း ပြောတဲ့ ကြာကူလီ အဓိပ္ပါယ်by Ko Iron on Wednesday, 18 May 2011 at 21:05မှတ်ချက် ( me == စိုင်းသိန်းဝင်း စံပယ် == အိမ်ထောင်ရေး ဖေါက်ပြန်သူ အမျိုးသမီးရဲ့ နံမည် ကို လွှဲပြောင်းပေးထားသည့် နံမည်)me: အိမ်ထောင်နဲ့ ပြည်ထောင် နဲ့အတူတူပဲ ဟိုးအရင်က ခရိယာန်တွေမှာ လင်မယားကွဲပိုင်ခွင့်မရှိဘူးစံပယ်: ဟုတ်တယ်နော် me: မစံပယ်အဲဒါ သိတယ်ဟုတ်စံပယ်: မသိဘူး အခုမှကြားတာ6:19 AM me: သူတို့က ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ သေတပန်သက်တစ်ဆုံး ပေါင်းသင်းပါ့မယ်လို့ ကတိပြုထားတဲ့အတွက် ကွဲပိုင်ခွင့်မရှိဘူ6း:20 AM မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာ သင်းအုပ်ဆရာတွေပြောတာ နားထောင်ကြည့် နောက်ကြုံရင် only the death can take you apart ဆိုတာ ပါတယ်စံပယ်: OMG me: အဲဒါကို နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ အသည်းအသန်တိုက်ဖျက်ရတယ်6:21 AM ပူရ်ှကင် သိတယ်မလား ရုရှား ကဗျာ ဆရာလေစံပယ်: သိတာပေါ့ သူကိုတော့ me: သူက နာမည်ကြီးတယ် အဲဒီ ကိစ္စကို ဆန့်ကျင်တဲ့နေရာမှာစံပယ်: ဟုတ်လား me: ငယ်စဉ်က အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လက်ထပ်ထားရတဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ကို ကွဲခွင့်လည်းမရှိ6:22 AM နောက်ကျမှ တွေ့တဲ့ ချစ်သူကိုလည်း တရားဝင် မပေါင်းသင်းနိုင်နဲ့ မြန်မာလိုကျတော့ အဲဒီလို ကိစ္စတွေကို တအားရှုံ့ချတာ6:23 AM အိမ်ထောင်ဖက်အပြင်နောက်ချစ်သူကို ရုရှားလို လူဘော့ညစ်ဂ် lover လို့ခေါ်တာ6:24 AM အဲဒါကို မြန်မာအဘိဓါန်မှာကျတော့ လင်ငယ်/မယားငယ် ဆိုပြီး ဘာသာပြန်ထားတာမှားတယ် တိတ်တခိုး ချစ်သူဆိုတာ အဲဒီ ပုရ်ှကင်ရေးထားတဲ့စာတွေဖတ်ရမှ သနားဖို့တောင် ကောင်းတယ်6:25 AM “ကြာခိုတယ်”ဆိုတဲ့စကား ဘယ်လို ပေါ်ပေါက်လာသလဲဆိုတာရော ကြားဖူးလား?6:26 AM စံပယ်: ပြောပြ တကယ်မသိသေးဘူး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် me: မန္တလေးနန်းတွင်းမှာ ပုတ်တလုတ်ကန်ဆိုတာရှိတယ်6:27 AM အဲဒီ ကန်ကြီး ကြာပန်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတာ နန်းတွင်းထဲက အပျိုတော်/လူပျိုတော်တွေက အဲဒီ ကန်ထဲမှာ ရေချိုးကြတယ်6:28 AM အပျိုတော်ဆိုတာ သိတဲ့အတိုင်း “ဘုရင့် ဘဏ္ဍာ”တွေလေစံပယ်: အင် me: သူကလွဲလို့ ဘယ်သူမှ မထိရ ဒါပေမယ့် သူ့မှာက မိဖုရားတွေကို အများကြီး အပျိုတော်က ရာချီတာ6:29 AM အပျိုတော်တစ်ယောက်က ဘုရင်နဲ့အလွန်ဆုံး တွေ့ရ တစ်ည နှစ်ညပေါ့ ဘုရင်အပေါ်ဘယ်လိုလုပ် သံယောဇဉ်ဖြစ်မလဲ ပြီးတော့ အလိုတူလို့ ညားတာလဲမဟုတ်6:30 AM ခြေတော်တင်တယ်ဆိုတာက မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းတမျိုးပဲလေ ဆိုတော့ ဘုရင်အိုကြီးထက်စာရင် အရွယ်တူ အတန်းတူ လူပျိုတော်တွေကိုပဲ စိတ်ဝင်စားကြ ချစ်ကြတာပေါ့6:31 AM ဒါပေမယ့် ဘုရင့် ကွယ်ရာ သူတို့တွေ့နိုင်တာဆိုလို့ ပုတ်တလုတ်ကန် ကြာရွက်တွေအောက်ပဲရှိတာလေ မိ ပြန်ရင်လည်း အသတ်ခံရအုန်းမယ် အဲဒီကနေ ကြာခိုတယ်ဆိုတဲ့ စကားပေါ်လာတာတဲ့ ကျနော်ကတော့ သူတို့ကို အပြစ်မပြောလိုဘူး ဘုရင်ကိုက မတရားတာလေ6:32 AM သဘာဝတရားကိုဆန့်ကျင်တော့ အဲလိုတွေ ဖြစ်ကုန်မှာပဲစံပယ်: စံပယ်အခုမှသိတယ်6:33 AM အဲဒီစကားလုံး ကြားဖူးပေမယ့် me: ရှေးဘုရင်ခေတ်ကို သိပ်ယဉ်ကျေးပါတယ်လို့ ပြောပြောနေတဲ့လူတွေကို ကျနော် သိပ်မုန်းတာ ကျွန်စနစ်လောက် မိုက်ရိုင်းစုတ်ပဲ့တာ မရှိဘူး7 minutes6:41 AM စံပယ်: ဟုတ်တာပေါ့ အခု အာဏာရှင်ပဲကျန်တော့တာ ကမ္ဘာမှာလေ me: သူလည်း ဘာထူးလဲ သူလုပ်တာ အကုန်တရားတယ် ကျန်တဲ့လူတွေကို ကျွန်လိုသဘောထားတာပဲ6:42 AM စံပယ်: ကိုစိုင်း ကြုံရင် ရုရှအကြောင်းတွေပြောပြနော် သူတို့စာတွေပါ me:း)ကြာကူလီ ငပျော့Like · · Shareမင်း ကို နိင် and Kyaw Thu Aung like this.Ko Iron ကဲ စိုင်းသိန်းဝင်းတို့ ကတော့ပညာရှင် ပီသ ပါပေတယ် ခင်ဗျာ၊ ကြာကူလီ အဓိပ္ပါယ်ကို ပညာရှင် ပီပီ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆို သွားတာ ကောင်းပါတယ် ၊ ဟီးဟီး၊ နောက်ဆုံးတော့ သူကြာကူလီ ခိုတဲ့ အမျိုး သမီးဟာ ၊ ဘယ်သူလဲ ၊ ဘာလုပ်တာလဲ၊ ဘယ်သူ့ မိန်းမ လဲ လို့ သိတဲ့ တစ်နေ့ လူတိုင်း ဟာကနဲ ဟင်ကနဲ ဖြစ်သွားပါလ်ိမ့်မယ်၊ အချက်အလက် အပြည့် အစုံ မူရင် အတိုင်း မကြာခင် ဖေါ်ထုတ် သွားပါ့မယ်စိုင်းသိန်းဝင်းက သူ့ကိုသူ လွှတ်တော် အမတ်ဆိုပဲby Ko Iron on Thursday, 19 May 2011 at 11:04 ပုံထဲ က အကြောင်းအရာကတော့ စိုင်းသိန်းဝင်းဟာ သူ့နဲ့ သိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ထုံစံ အတိုင်း ကြွားဝါနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ၊ သူ ပြည်တွင်းမှာ ရှိ နေရင် လွှတ်တော် အမတ်တောင် ဖြစ်ဦးမယ်တဲ့ ၊ ဘာမှ မသိတဲ့ အသက်ငယ်ရွယ်သူ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို ဖြီးနေပါတယ်၊ စိုင်းသိန်းဝင်း ရေ မင်း လွှတ်တော်အမတ်တော့ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ လွှတ်တော် တပ်နေတဲ့ မင်း ဂျူနီယာတွေရဲ့ ဖိနပ်ပဲ တိုက်ရမယ်၊ဟဟ မယုံရင် စိုင်းသိန်းဝင်း နဲ့ စကားပြောနေတဲ့ ကောင်မလေးကို ဒီ Record က မှန် မ မှန် မေးကြည့်ပေတော့ဗျာ၊ ဂျီမေးက ppswin@gmail.com ပါကျောက်မဲ ထ ၂ မှ ဆရာမ နှင့် စိုင်းသိန်းဝင်းby Ko Iron on Thursday, 19 May 2011 at 11:33tusannn@gmail.com tusannn: hi me: ဟိုင်း5:36 AM tusannn:်fb မှာက chat ရတာသိပ်ကြာတာဘဲ me: ဟုတ်တယ် tusannn: ချက်ချင်မထွက်ဘူး me: သူ့မှာ တခြား features တွေများလွန်းလို့ tusannn: ဟုတ်မှာ me: ပြီးတော့ news update ကလည်း စက္ကန့်တိုင်းလုပ်နေလို့ tusannn: ကျောက်မဲမှာ အေးနေပြိ me: ဟုတ်လား ဒီနှစ်အတော်အေးတယ်ကြားတယ် tusannn: အခု ဘယ်မှာလဲ ဟုတ်တယ်5:37 AM me: ဥရောပရောက်နေပါပီ tusannn: ဒေါ်အေးအေးဆွေက သတိရကြောင်းတွှေုရင်ပြောပေးတဲ့ me: သင်္ချာဆရာမလား မသိဘူး tusannn: အင်း ဟုတ်တယ် me: သူ့အိမ်က5:38 AM ခွေးတိုက်နဲ့နီးတယ် tusannn: အခုphysics သငိတယ် me: သြော် ကျနော်တို့တုန်းက သင်္ချာ tusannn: ဟုတ်တယ် အင်း 8 တန်း လေ5:39 AM နေရတာအဆင်ပြေရဲ့လား me: ကျနော့် contact name ကို rename လုပ်ထားအုန်းနော် tusannn: ဟုတ်တယ် me: တခြားပြောင်းချင်ရာ နာမည်တစ်ခုခုပေါ့ ပြေပါတယ်5:40 AM tusannn: ဟဟ သူရဲကောင်း လို့ပြောင်းလိုက်ပြီ me: အဲ tusannn: ဟဟ me: သူရဲကောင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ tusannn: သရဲ မဟုတ်ပါဘူး5:41 AM me: ကျနော်ဆယ်တန်းတက်နေတုန်းကတော့ အငယ်တန်းက ခလေးတွေက သရဲလို့ခေါ်တယ် နာမည်ပြောင် tusannn: ဒါပေမယ့် သတ္တိရှိတာတော့ အမှန်ဘဲ ရုပ်ကြည့်ခေါ်တာနေမှာပေါ့ ဟဟ me: မိသားစုအပေါ် မညှာရာတော့ ကျသွားတယ်ဗျြာ5:42 AM အမှန်က ခုနောက်ပိုင်း ကျနော် ရေဒီယိုတွေမှာ သိပ်တောင်မပြောသင့်ဘူး tusannn: ဒါပေမယ့် သူတို့နားလယ်ပါတယ် ပြောပိါတို့တွေ ကတော့ သဘောကျတယ်5:43 AM me: သူတို့တွေ ကျနော့် မိသားစုအပေါ်ပြဿနာမရှာတာတော့ အင်း... tusannn: စိုင်းသိန်းဝင်းရဲ့ တပ်မှုးတပ်သားတွေ ဆိုရင် print out လုပ်ပြီး ကျောင်းမှာ လိုက်ဖတ်ခိုင်းတာ me: ကျေးဇူးတင်ရမလို tusannn: အဲလိုတော့မရှာပါဘူး watching ရှိမရှိတော့မသိဘူး5:44 AM me: ဟုတ်လား သတိလည်းထားအုန်းနော် ဆရာမ ကျနော်က နိုင်ငံခြားကနေအော်နေတာ ဆရာမက အထဲမြှ tusannn: စောစောကလဲ voa က စစ်မှုထမ်းရေးဥပဒေအကြောင်းျေူးတာ နားထောင်နေတာ5:45 AM me: ဒုက္ခရောက်မစိုးလို့ ဗီအိုအေမှာတော့ ကျနော် မပြောလိုက်ဘူး tusannn: အင်းဟုတ်တယ် ဒါပေမယ့် သိပ်ကြောက်မနေချင်ဘူး me: ဘီဘီစီမှာ ကိုအောင်လင်းထွဋ်ပြောတယ် ကျနော်က RFA မှာပြောလိုက်တယ် tusannn: ဟုတ်တယ် RFA က မှားလို့(မယံရင် tusannn@gmail.com ကို မေးကြည့်ပေတော့ ၊ အထက (၂) ၊ ကျောက်မဲ က ဆရာမ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်ပါ ခင်ဗျာ)Myanmar Express
အကျဉ်းသား ၁၄၀၀၀ကျော် လွှတ်ခြင်းသည် ရှုံ့ချ ဝေဖန် စရာမဟုတ်ပါအတိုက်အခံဆိုတာ အတိုက်နဲ့ အခံ နှစ်ခုပဲ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုက ပြည်သူများကို ပျော်ရွှင်စေတယ်၊ ကောင်းမွန်စေတယ်ဆိုရင် အလိုက်အထိုက် အသိမှန်ပြုသင့် ချီးကျူးသင့်ပါတယ်။ အကောင်းမြင်တယ်ဆိုတာ သူတော်ကောင်းကျင့်စဉ်ပါ။ သူတော်ကောင်းမဟုတ်လို့ အကောင်းမမြင်နိုင်သေးရင်တောင် အမှန်ကိုတော့ မြင်သင့်ပါတယ်။ ဖြစ်သမျှ၊ လုပ်သမျှ မကောင်းပြောနေလို့တော့ မဖြစ်သေးပါဘူး။ အကျဉ်းထောင်ထဲက အကျဉ်းသား ၂ သောင်းနီးပါးလွှတ်တယ်ဆိုတာ ရှုံ့ချစရာ၊ အပြစ်တင်စရာ၊ ဝေဖန်စရာ မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ကြေညာချက်ကြောင့် ဘယ်မြန်မာပြည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ထိခိုက်မှု၊ နစ်နာမှု၊ စိတ်ဆင်းရဲမှု မဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။ စိတ်ချမ်းသာမှုတွေပဲ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ ဒါကို ဘာလို့များ အပြစ်တင်သံတွေ၊ ဝေဖန်သံတွေ ရှုံ့ချသံတွေ ကြားနေရလဲ စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကြောင့် ပျော်ရွှင်နေကြသူများထောင်ကထွက်ရလို့ မကျေနပ်တဲ့လူတွေလွတ်မြောက်လာတဲ့အထဲက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတဲ့ လူတချို့က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်း၊ မကျေနပ်တဲ့အကြောင်း ပြောကြပါသေးတယ်... ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်တာက ပြည်သူပေါင်းများစွာ၊ ဝမ်းသာကြည်နူးပျော်ရွှင်စေဖို့နဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးမှာ ပါဝင်ဖို့နဲ့ ငဲ့ညှာလို့ ဆိုတာ ပါနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်သမ္မတဲ့ တာဝန်ရှိသူများကို တစ်ခုလောက်တော့ ကွန်ပလိန်း တက်ချင်ပါတယ်.. နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်ကြောင့် စိတ်ညစ်သွားတဲ့လူတွေ၊ ထောင်ကလွတ်လို့ မကျေနပ်တဲ့လူတွေကိုတော့ သူတို့ဆန္ဒကို ငဲ့ညှာပြီး ထောင်ထဲမှာ ပျော်သလောက်နေခိုင်းသင့်ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေက ”တည်ဆဲဥပဒေတစ်ခုခုကို မဖေါက်ဖျက်ပဲ ထောင်ကျနေသူတစ်ဦးမှ မရှိပါ” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အပြစ်မရှိပဲ ထောင်မချဘူး ဆိုရင်လည်း ထောင်ကလွတ်လို့မကျေနပ်သူများအနေနဲ့ ထောင်ကျအောင် လုပ်နည်းကိုတော့ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဖြစ်လို့ မကျေနပ်ဘူးတောင် ပြောနေဖို့မလိုပဲ နေ့တစ်ရက်မကူးခင် ထောင်ထဲပြန်ဝင်နိုင်အောင် တည်ဆဲဥပဒေတစ်ခုသာ ချိုးဖောက်လိုက်ပါ။ အားလုံးစိတ်ချမ်းသာဖို့ နိုင်ငံတော်မှ တာဝန်ရှိသူများက ကူညီကြပါလိမ့်မယ်။လွတ်ငြိမ်ချမ်းသာခွင့်ကြောင့် တစ်ညလုံး စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည် ဟု ပြောဆိုသူတစ်ချိန်က အပြစ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်စုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်သို့ ဂျွန်ယက်တော ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ကို အားလုံးသိကြပေမယ့်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပြစ်မရှိကြောင်း ကို အခုချိန်ထိပြောနေကြတုန်းပါပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်တွင်းသို့ ဂျွန်ရက်တော့ စတင်ဝင်ရောက်ကြောင်း သိစဉ်က ဂျွန်ယက်တော ဆိုသည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အလွန်အင်မတန် လေးစား မြတ်နိုးသည့် ထူးခြားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကြောင်း၊ ပညာပြည့်ဝသည့် စာရေးစရာတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ ရေကူးချန်ပီယံတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ချင်တာတစ်ခုကို မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့သည့် ခံယူချက်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြပေမယ့် ဂျွန်ရက်တောကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ် ၁ နှစ်ခွဲကျချိန်မှာတော့ ဂျွန်ရက်တော ဆိုသည်မှာ အစိုးရဲ့စေခိုင်းမှုကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိမ်အတွင်းသို့ဝင်ခဲ့ရသည့် စိတ်ရောဂါသည် တစ်ဦးအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ကြပြန်သည်။ သို့သော် သေချာသည်မှာ ဂျွန်ရက်တောနှင့် အစိုးရတို့မှာ အဆက်အသွယ်ရှိသူများမဟုတ်ကြောင်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ဂျွန်ရက်တောကို နေအိမ်မှာခွင့်ပြုညအိပ်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ် မှားယွင်းသည့်အလုပ် လုပ်ခဲ့သည်မှာ သေချာပေသည်။ အမှန်ကန်သောအလုပ်လုပ်သူ၊ မှားယွင်းသောအလုပ်သူ၊ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ခုခု ချိုးဖောက်သူ တို့အနေနဲ့ အရေးယူခံရမှာကို မကြောက်သင့်သလို ကာယကံရှင်နှင့် ပက်ဝန်းကျင်မှလူများအနေဖြင့် လည်း စဉ်းလုံးချောကောင်းနေလျှက်နှင့် အပြစ်ဒဏ်ကျကြောင်း မပြောသင့်ပါ။ နိုင်ငံရေးလုပ်ရင် တကယ်ထောင်ကျသလားနိုင်ငံရေးလုပ်ရင် တကယ်အကျဉ်းကျခံရလား၊ နိုင်ငံရေးလုပ်သူတွေထောင်ကျလား ဆိုတာကိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မေးကြည့်ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မကြာခဏပြောနေတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ ဘာလုပ်နေလုပ်နေ နိုင်ငံရေးပါတဲ့။ အိမ်မှာထမင်းချက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလည်း နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာပါပဲလို့ မနှစ်က နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်သမျှလူအကုန်ကို အစိုးရက ထောင်ချတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေတောင် ထမင်းချက်ပေးမယ့်လူ ရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး...။ ဟန်းနီးမွန်းထွက်ရင်း နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူ ဒေါ်စုယုံကြည်တာတွေ မယုံကြည်တာတွေ ပြောရအောင် ဥပဒေဆိုတာ ဘုရားသခင်လားယုံကြည်ချက်ကြောင့်ပဲ အကျဉ်းကျကျ မယုံကြည်ပဲနဲ့ အကျဉ်းကျကျ အကျဉ်းကျတာက အကျဉ်းကျတာပါပဲ။ လူသက်ရင် ထောင်ကျမယ်ဆိုတာကို မယုံလို့သက်သူရော၊ သူများမိန်းမကို ကြာခိုရင်ထောင်ကျမယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်လို့ စမ်းကြည့်ရင်း ထောင်ထဲဝင်လာသူရော အားလုံးက အကျဉ်းကျတာပါပဲ။ ဥပဒေမှာ ယုံကြည်တယ် မယုံကြည်ဘူး ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ယုံကြည်ရအောင်လည်း ဥပဒေဆိုတာ ဘုရားသခင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပဒေဆိုတာ လိုက်နာဖို့ထုတ်ထားတာဖြစ်သလို မလိုက်နာလျှင် ဘာအပြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်း ရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်းလုံးချောပြည့်စုံကောင်းမွန်နေသည့် ဘယ်တစ်ယောက်ကိုမှ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ထမင်းအလကားကျွေးထားမှာမဟုတ်သလို သူ့လုံခြုံရေး၊ စားရေးသောက်ရေး၊ နေရေးထိုင်ရေးတွေအတွက် ဝန်ထမ်းတွေခန့်ပြီး တာဝန်ပေးနေမည်မဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်လျှင်စိပ်၊ မယုံရင် မစိပ်နဲ့ ... ကိုးနဝင်း မိုးလင်းမှသိမယ်ကင်မယာ ကိုင်ရုံလေးနဲ့ ထောင်ကျမယ်ဆိုရင်အပြစ်တစ်ခုလုပ်ထားပြီး အပြစ်မရှိဘူးပြောချင်လျှင်လည်း ယုတ်တိရှိရှိ လိမ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘာအပြစ်မှမလုပ်ပဲ ကင်မယာလေး ကိုင်ရုံနဲ့ ထောင်ကျတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်မျိုးကတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဘာအပြစ်မှ မရှိပါဘူး ကင်မယာလေး ကိုင်တာနဲ့ ထောင်ကျတယ် ဆိုရင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ကင်မယာ ကိုင်ဆောင်သူအရေအတွက် သိန်းနှင့်ချီ၍ရှိရာ ထောင်ထဲတွင်ပင် နေရာဆံ့မည်မဟုတ်ပေ။ ကင်မယာကိုင်တိုင်း ထောင်ကျရင် ကင်မယာဆိုင်ဖွင့်သူများမှာ ၁၀ ခါပြန် သေဒဏ်တောင် ကျသင့်ပါပြီ။ ဒီဆိုဒ်လောက်ဆို ၁၀ ခါပြန် သေဒဏ် ပဲဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ပြောသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (သို့) ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျသူများ၏ ဂုဏ်ရည်များ( ၁ ) အလွန်ရိုးသားပြီး ဖြူစင်သူများဖြစ်ကြသည်။( ၂ ) နာရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကူညီနေသူများ၊ HIV ဝေဒနာသည်များအားစောင့်ရှောက်နေသူများ၊ ကလေးများအားအခမဲ့ ပညာသင်ကြားပေးနေကြသူများ၊ မိဘမဲ့ကလေးများအား စောင့်ရှောက်နေသူများ ဖြစ်ကြသည်။( ၃ ) ထိုသူများ အကျဉ်းကျနေချိန်တွင် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လသားအရွယ် ခလေးငယ် ရှိနေကြသည်။( ၄ ) သမိုင်းသုတေသီများ ဖြစ်ကြသည်။( ၅ ) အပြင်မှာကျန်ခဲ့သူများကို NLD ကသော်လည်းကောင်း ၊ အဖွဲ့စည်းတစ် ခုခု ကသော်လည်းကောင်းထောက်ပံ့ပေးကမ်းမှ သာအဆင်ပြေကြသူများဖြစ်ကြသည်။( ၆ ) မျက်စေ့ဝေဒနာ ၊ လေးဘက်နာ ၊ နှလုံးရောဂါ ၊ အရိုးကြီးပေါင်းတက်ရောဂါ ၊ အစာအိမ်ရောဂါ ၊မကြာခသွေးသွင်းရသော သွေးကင်ဆာရောဂါ ၊ ကိုတစ်ခြမ်းလေဖြတ်ရောဂါ အစရှိသော ၉၆ ပါးရောဂါ များထဲမှ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု အချို့ နှစ်ခု သုံးခု စုပေါင်း၍ ခံစားနေရသော ဝေဒနာသည်များ ဖြစ်ကြသည် ။( ၇ ) ထူးဆန်း၍ ရှားပါးသောဆေးတစ်မျိုးမျိုး ကိုစွဲသောက်နေရသူများဖြစ်ကြသည် ။( ၈ ) စာဖတ်ခြင်းကို အလွန်အမင်း ၀ါသနာထုံသော စာပေချစ်သူများဖြစ်ကြသည်။( ၉ ) အရိုးကြေကြေ အရေခမ်းခမ်း လုပ်မည်ဟု ကြွေးကြော်နေသော်လည်း အအေး ဒဏ်မခံနိုင် ကြသူများဖြစ်ကြသည် ။(၁၀) သူမ ယောက်ျား ကျနေတဲ့ထောင်ကိုပြောင်းပေးရန်စာမကြာခဏတင်ပြီး မပြောင်းပေးပါက အစာငတ်ခံမည် ၊ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေမည်ဟု ဆိုကာ သတ္တိမကြာခဏပြနေသူ များလည်းဖြစ်ကြသည်။(ကိုယ့်ဘာကိုယ်သာ မစားချင်လို့မစားတာ ထောင်ထဲမှာ မကျွေးရင် အငတ်ထားတယ် ပြောအုံးမှာ)(၁၁) အလွန်အမင်း အသန့်အပြန့်ကြိုက်ကြသူများဖြစ်ကြသည် ။(၁၂) ဘာသာရေး အလွန်ကိုင်းရိုင်းပြီး၊ တရားထိုင်ခြင်းကို အံ့သြ စရာကောင်းလောက်အောင် တစိုက်မတ်မတ် နှစ်ရှည်လများကျင့်ကြံအား ထုတ်နေသူများဖြစ်ကြသည် ။Myanmar Express
ရွှေတစ်ယောက်..မလေးရောက်စ..စကားက..မပေါက်မတောက်တခေါက်နဲ့.......Ini (အိနိ..ထိုနည်းလည်းကောင်း)မကြာမကြာသုံးပြီးအလုပ်တွေကြိုးစား...အပေါင်းအသင်းလည်းမများ.....ဘယ်ကိုမှလည်းမသွား...ခေါက်ဆွဲနဲ့ ကြက်ဥတွင်တွင်စားရင်းပြောင်းပြန်သွားကားလမ်းတွေကို..မရဲတရဲ..ကူးနေရတယ်........၊၊ဘုရားတရား..ပွားများ..အိမ်အကြောင်း..စဉ်းစား...စီးပွားရေးအကြောင်း..စဉ်းစား...အလုပ်တွေအရမ်းလုပ်....ငွေထုတ်တာနဲ့ အမြန်ပို့...အဖေ..အမေဘို့..သားမယားဘို့.....၊၊ကိုယ့်ဘို့တော့နည်းနည်းချန်...ရှိတာလေးနဲ့ ကြံဖန်စား...ခေါက်ဆွဲ တစ်လှည့်..ကြက်ဥတစ်လှည့်နဲ့..မိသားစုတွေ..အပေါ်မှာငဲ့...အော်.....တော်ရှာပါရဲ့............၊၊ဒီလိုနဲ့....ကျင်လည်တာ..ကြာခဲ့ပေါ့...တစ်နှစ်တာ....။ခုတော့....စကားလည်း..အတော်ပေါက်..မာကန်းလားမီနွန်းလားနဲ့ ရသမျှပိုက်ဆံအိပ်ထဲထည့်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့...မြန်မာဆိုင်တွေ..ခဏခဏရောက်....အရက်..ဘီယာ ကြုံသလိုသောက်...တစ်ခါတစ်ခါ..ဟိုအတန်းရောက်..........၊၊အလုပ်ရှင်ကိုလည်းမကြောက်....ရဲ..ဆိုတာလည်းမကြောက်....မိသားစုကိုလည်းခေါက်ကြက်ဥနဲ့..ခေါက်ဆွဲပေါ်မှာ...သစ္စာဖောက်.......၊၊ဒီလိုနဲ့..ရွှေတစ်ယောက်...အိမ်ကိုလည်း..ငွေမရောက်တော့ပေ...........၊၊နောက်ဆုံးပြီး နိဂုံးပညာမဲ့တွေနဲ့ လက်ကြောမတင်းတွေစုပေါင်းတွေဝေရာ လမ်းကိုပြောင်းနိုင်ငံရေးယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင်ယူအန် (UN) ယောင်ယောင်၊ အယ်လ်အေ (LA) ယောင်ယောင်လျှောက်မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်ဘဝကနေပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအတွက် အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူရဲကောင်းဘဝ တစ်ခါတည်း တန်းရောက်ဟိုဘလော့ဝင်ဆဲ ဒီဘလော့ဝင်ဆဲကိုယ့်အဖေလာက်ရှိလဲဆဲဖို့ဝန်မလေးအဘိုးလောက်ရှိလဲဆဲဖို့ဝင်မလေးတစ်နေ့တစ်နေ့ ငရဲတွင်းဘေးမှာ အချိန်ကုန်တစ်နေကုန်အလေလိုက်တယ်မိုက်တဲ့ ငါပါလား......Myanmar Express
Facebook မသုံးတော့ဘူးဆိုတဲ့ စိုင်းသိန်းဝင်း အကြောင...